Biden Oo Kordhiyay Tirada Qaxootigu Dalkiisu Qaadanayo – Heemaal News Network
Trump ayaa tirda qaxootiga ay qaadan karaan ka dhigay 15,000, iyada oo ay weliba dalal gaar ah uu xanibaad ka saaray in ay ka mid noqdaan.
Wuxuu sida oo kale sheegay inuu maamulkiisa uu damacsan yahay inuu tirada qaxootiga sanadka soo socda la aqbalayo uu ka dhigo 125,000. Balse wuxuu qiray Mareykanka uu dhab ahaan uu sanadkan ku guuleysn doonin inuu aqbalo 62,500 oo qoxooti ah, isaga oo ku doodaya in maamulkiisa ay ahayd inuu ‘saameynta’ maamulki isaga ka horreeyey uu ka jaro.
Mr Biden ayaa ku sheegay bayaan degdeg ah uu bishii April soo saaray, qaabilaadda qaxooti gaaraya ilaa iyo 15,000 “waxay xal u noqotay tabashooyinki baniaadaminmo ee taagnaa balse ma ahayn mid rabitaanka qaranka ka tarjumeysay”.
Madaxweyne Biden wuxuu sida oo kale uu qaaday xayiraaddii dib u dajinta ee saarneed qaxootiga ka soo jeeda waddamada Somaaliya, Suuriya iyo Yemen iyaga oo fursadaha ugu badan siiyey Afrika, Bariga Dhexe iyo Bartmaha Mareykanka.
Balse Mr Baiden oo cadaadis xooggan kala kulmayey kooxaha xuquuqda qaxootiga u dooda iyo xubno ka tirsan xisbigiisa, ayuu Aqalka Cad uu shaaca ka qaadday inuu madaxweynaha uu tirada qaxootiga uu dalka Mareykanka qaabilayey uu dib ugu noqonayo.
Go’aanka Biden uu ku kordhiyey tirada qaxootiga uu dalkiisu qaabilayo waxaa si weyn ugu riyaaqay hay’adaha arrimaha qaxootiga oo uu ka mid yahay Guddiga badbaadada caalamiga ah ee IRC.
“Go’aanka madaxweyne Biden wuu wanaagsan yahay wuxuuna u wanaagsan yahay Mareykanka iyo qaxootiga,” ayuu yiri madaxa hay’addaasi David Miliband, oo horay xisbiga Labour ku matalayey barlamaanka Britain.
“Waxaan soo dhaweyneynaa tallaabbadan aadka u qiimaha badan oo qaxootiga samatabixinaya afar sano kaddib oo si weyn wax uga baddaleyso siyaasadda dalka ee soo jirtay”.
Tababar loo soo Xiray Ardayda Computer Science Ee J/EELO Oo Shahaadooyin la Gudoonsiiyay.
Xuseen Warsame: Xaq Looguma Laha IN La Yidhaahdo Ka Guur Villa Somaliaya
Talyaaniga Oo Maraakiib Dagaal U Soo Diraya Xeebaha Soomaliya
Dad loo Xir-xiray Inay Biyaha Wabiga Shebeele Ku Fureen Magaalada Jawhar.
Xisbiga Kulmiye Oo la Dardaarmay Musharixiinta Gobolada Galbeedka Ee Somaliland.